Sida loo helo milkiilaha iphone lumay ama la xaday | Wararka IPhone
Carmen rodriguez | | Wararka IPhone, Amniga IPhone
Si la yaab leh, kaliya maahan in iPhone la xaday, sidoo kale waa la lumiyay. Maxaa la sameeyaa markaad la kulanto? jawaabta cad ayaa ah isku day inaad u celiso cida iska leh, laakiin sida caadiga ah waxaan ka baqeynaa inaan fulino hanaan ku dambeeya gacmaha qofka oo leh cilado naga yar.
Helitaanka milkiilaha saxda ah way adkaan kartaa haddii lambar koodh la dejiyo, laakiin haddii iPhone-ka aad heshay uu shaqeynayo Waxaad dalban kartaa qaar ka mid ah khiyaanooyinka aan soo jeediyo si ay kaaga caawiyaan inaad kula xiriiraan milkiilaha a Waqtiga diiwaangelinta.
1 Haddii uusan jirin nambarka qufulka, hubi wicitaannadii ugu dambeeyay
2 Haddii ay jirto nambarka sirta ah, weydiiso Siri caawimaad
3 Qalabka ku hay oo ka jawaab wicitaanada soo socda
4 Raadi IMEI oo la xiriir ISP-gaaga
6 Ku saabsan iPhones lumay ama la xaday
Haddii uusan jirin nambarka qufulka, hubi wicitaannadii ugu dambeeyay
Qofna ma jecla inuu ku duulo asturnaanta qof kale, laakiin ugu dambeyntii waad ka reebi kartaa haddii ay tahay sabab wanaagsan.
Ka dhex raadi wicitaanada, kii ugu dambeeyay ama kuwa la aqoonsaday sida «Casa»Wicitaanna, way ka farxad badnaan doonaan markay aakhirka adduunka tagaan si ay u soo qaataan taleefannadooda iPhone. Ka fikir inay ku soo wacayaan inay kuu sheegaan, cidina xusuusan mayso inaad eegtay liiska wicitaanka.
Haddii ay jirto nambarka sirta ah, weydiiso Siri caawimaad
Dadka intooda badani ma ogaanayaan in xitaa leh furaha furaha iPhone, waa la siin karaa si loo sameeyo waxyaabo sida wicitaanno ama dir farriimoDabcan mooyee, waxay ku naafoobeen shaqadan Dejinta.
Qaar ka mid ah xulashooyinka ayaa noqon lahaa; «Wac guriga«,«Hooyo wac"Ama"Wac aabe»
Qalabka ku hay oo ka jawaab wicitaanada soo socda
Haddii aysan waxba shaqeyn, waxaan kaliya shaqeyneynaa iPhone ku sii daa oo dambi waa ku sugayaa, sidoo kale mulkiilaha wac, ama saaxiib kula xiriiri kara si kale.
In kastoo ay umuuqato wax qariib ah inaad ka jawaabto taleefanka qof kale, xusuusnow taas waxaad u sameysaa qofkaas, adiga maahan ama sababo amaan yar awgood.
Raadi IMEI oo la xiriir ISP-gaaga
IPhone kasta wuxuu leeyahay lambar u gaar ah oo loo yaqaan IMEI oo lagu daabacay meel. Waxaad u adeegsan kartaa macluumaadkan si aad ula socoto milkiilaha. Haddii iPhone uu daaran yahay, waad arki kartaa magaca shirkadda taleefanka ee geeska bidix ee kore, tani waxay noqon kartaa bar bilow si loo helo milkiilaha.
Shirkadan waxaad u baahan doontaa oo keliya IMEI si ay kuu siiso taageero terminal ah ugu dambayntiina gacan ka geysata helitaanka milkiilaha.
El IMEI waad ka heli kartaa jir ahaane ku jira:
iPhone 5s, iPhone 5c iyo iPhone 5: Waxaa lagu daabacay daboolka dambe, aagga hoose.
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS iyo iPhone 3G: Ka saar saxaaradda SIM-ga waxaadna ka heli doontaa IMEI iyo lambarka taxanaha ah oo la daabacay.
Jiilka koowaad ee iPhone: Waxaa lagu daabacay daboolka dambe, aagga hoose.
IMEI-da lagu daabacay dhamaan iphone-yada ayaa ah Lambarrada '15'. Haddii milkiilaha iPhone ee su'aasha laga qabo uu leeyahay ISP CDMA, sida Verizon ama Sprint, kaliya waxay ubaahantahay 14 lambar ee uguhoreeya tiradaas, sidaa darteed waxay kaliya ka tagaysaa lambarkii ugu dambeeyay.
Hadaad aragto inaad tahay ku murginaaya aad u badan, xusuusnow in aan waxaan haynaa adeegyo kaa caawin kara, sida;
Soo hel shirkadda iphone iyo inaad awoodo inaad laxiriirto shirkada.
Ogow haddii aad xor tahay waana inaad qaadataa koorso kale.
Ogow haddii iPhone uu xiran yahay ama la xaday oo u warbixiyo booliska.
Ku saabsan iPhones lumay ama la xaday
Fadlan la soco in milkiileyaal badani isticmaali karaan Raadi iPhone-kayga si ay ula socdaan qalabka ama waxay wici karaan shirkaddaada si ay u soo sheegaan khasaarihiisa ama xatooyada iyo u gudub qufulka IMEI. Hadday taasi dhacdo, taleefanka ayaa laga yaabaa inuusan ka shaqeyn shabakadaha badankood.
Haddii aad hesho oo aadan soo celin, waxay noqon kartaa la xaday. Haddii la hawlgeliyey Raadi iPhone-kayga waa la hawlgeliyaa oo milkiiluhu si guul leh ayuu kugula socdaa, waxaa jirta fursad taas ka soo xaadir albaabkaaga sharciga fulinta gacanta gacanta. Bari ma aha dhamaadka wanaagsan ee ujeedooyinka wanaagsan. Maskaxda ku hay in go'aannada aad ka gaarto tan labaad ee aad soo qaadatid taleefankaaga iPhone ay saameyn aad u badan kugu yeelan karaan.
Haddii aad isku dayday mid ka mid ah tallaabooyinkii hore waxaad awood u yeelan doontaa inaad caddeyso taas ma isku dayday inaad soo celiso iPhone-ka, laakiin qofna kaa qaadi maayo. Si fiican u qiimee waxa aad ku sameyso maaddadan kahor intaadan bilaabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Amniga IPhone » Sida loo helo milkiilaha iphone lumay ama la xaday
Waxaan la wareegayaa raadinta taleefankayga iyo in ka badan oo aan ku dhejinayo albaabka gurigaaga, haddii uu leeyahay khalad yar oo ugu yaraan 50 mitir ah, beer ay ku jiraan 5 qof haddii aad ka heli karto, laakiin waddada bulshada deriska, kaftan la'aan.
Mar qura ayaan lumiyay oo Raadi iPhone-kayga ayaa kufashilmay wax kayar 5 mitir ...
50 mitir waa qiyaas, adeega goobta wuxuu ku saleysan yahay isku dhafka GPS, WiFi, shabakadaha dadweynaha iyo iBecacons. Sida iska cad isku mid maahan inaad joogto magaalo luntay oo ku taal Pyrenees marka loo eego bartamaha caasimada sida Madrid ama Barcelona.
Waxay kuxirantahay sida aad u noqon karto mid sax ah oo hadii aadan ku sugneyn rugta rugta loo xirxiray nolosha, waxaad kaheli kartaa isticmaalaha, waa inaad kaliya rabtaa.
Waad ku mahadsantahay fikradaada!
Cristian Camilo Guarin Mendoza dijo
WAAN HELAY MAYAAL IPHONE A1387 WAXA AY KU LEEYAHAY FURO 4-DIGIT AH MIYAANAN U SHEEGI KARIN SIRI YAA AH IPHONE-kan? HA IGA TAGIN HADII QOF AY OGAATO WAXAAN SAMAYN KARO SI AAN LOO XARIIRO Milkiilaha FADLAN KA JAWAAB MAHADSANIDAN OO AAN KU NOOLAHAY BOGOTA COLOMBIA DEN XALALO WAANA ISKU DAYAY IN AAN FURO SI AAN U EEGO XIRIIRKA KELIYA WAXA AAN KU GUULAYSTAY INAY XIRTAY
Jawaab ku sii Cristian camilo Guarin mendoza
RUNTA AY TAHAY IN LAGU FADEEXAY, WUXUU AHAA Iibsasho Xun, Gabadha Ii Iibisay IPHONE-KA 6 MA II SII JAWAABO IMEI KANA RIIXA TELEFAHAYGA WUXUU KU SHAQAYSAN YAHAY, WAANA RABAA INAAN OGAADO SIDII LOO XARIIRI LAHAYN Milkiilaha LAGU AWOODO INA UU UU UU SHEEGO MAXAA I SAMEY OO MAXAAD II CAAWIN KARTAA AMA WAX KASOO KORDHIN?
Had iyo jeer kahor intaadan iibsan iPhone la isticmaalay waa inaad xaqiijisaa inuusan laheyn qufulka firfircoon, waxaad ka arki kartaa icloud.com/activationlock
Haddii aad ogtahay halka uu ku yar yahay ama ka yar yahay, waad soo wici kartaa waadna dhageysan kartaa, gaar ahaan haddii aad leedahay laxan ka duwan kan kale.
Jawaab Javier Diaz
Ka waran haddii aan u geyno booliska si ay dib ugu soo celiyaan?
Waa bedel, laakiin waxaa jira laba waxyaalood oo badanaa dhiirrigeliya doonaya in la soo celiyo ka hor intaan booliska la aadin:
1. In aan ka baqeyno in booliska ilaaliyo, ogow in xaraashka ay sameeyeen ciidamada amaanka ee dowladdu ay daboolayaan dhammaan noocyada guryaha lala wareegay marka laga reebo laptops, kaamirooyin, taleefanno, iwm. Shakigu wuxuu ku yimaadaa muwaadinka.
2. Sug magdhawga soo celinta.
Laakiin sida wax walba, waxaa jira dhadhan iyo ikhtiyaarro qof walba, waad ku mahadsan tahay wax ku biirintaada.
David il signorino dijo
Haddii iPhone uusan haysan lambarka furaha shaashadda, waxaad sidoo kale aadi kartaa Settings> iCloud ama Settings> Mail, xiriiro, kaalandar. si aad u aragto cinwaanka emaylka milkiilaha terminalku yahay oo aad u qorto qofkaas si aanad ugu xirnayn inaad ku haysato iPhone batteriga illaa aad ka soo wici karto ama ku soo wici karto.
Jawaab David Il signorino
Aad u wanaagsan, kuma aanan dhicin tan ...
Waad ku mahadsan tahay David inuu nala wadaago!
Waxa kale oo suurtogal ah in la waco AppleCare si loo xaqiijiyo haddii terminaalku furan yahay iyo in kale iyo / ama haddii qufulka firfircoonaanta la hawlgaliyo haddii aynaan marin u helin goobaha iCloud. Waxay ku siin karaan macluumaadkan gabi ahaanba bilaash.
Waxaan ka shakisanahay inay ku siin doonaan macluumaad ku saabsan boosteejada haddii aad soo wacdid adigoon wax macluumaad ah ka haynin milkiilaha, maadaama ay tahay inaad iskaa u sheegto sidaada oo kale, laakiin iyagu uma hoggaansamaan Isbaanishka LPD.
Haddii aad tagto Apple Store, waxaad weydiisan kartaa inay kuu sheegaan magaca magiciisu yahay iyo inay ku siiyaan xogtooda
Hadday saas sameeyaan, waxay ku xad gudbaan siyaasaddooda ilaalinta xogta, tani maahan ikhtiyaar wax ku ool ah, ka fikir inaan si ula kac ah u xaday terminal oo aan aaday Apple si ay i siiso xogta, anigoo leh waxaan doonayaa inaan soo celiyo, iyaguna waxay i siiyaan milkiilaha xogta…. Mahadsanid ! hadda waxaan samayn karaa khiyaano dhammaystiran, Apple-na waxay leedahay cabasho ah inaysan ixtiraamin LPD.
Laakiin way wanaagsan tahay inaan dhammaanteen gacan ka geysano helitaanka xulashada ugu fiican, mahadsanid Jaume!
Waa salaaman tahay, fiiri, aniga ayey igu dhacday in aan taleefanka gacanta u beddelo iPhone 5 muddo laba maalmood ah wiilkuna ii sheegay in la furi karo, wuxuu isiiyay aniga oo aan qashin lahayn waxaanan doonayaa inaan dib ugu soo celiyo, Allah, milkiilaha, laakiin ma aqaano sida loo sameeyo, waxaan u baahanahay caawimaad
Waad salaaman tahay, ma awoodday inaad hesho macluumaadka milkiilaha? Isla waxbaa igu dhacay aniga & Anigu garan maayo sida loo ogaado xogta milkiilaha
Ku jawaab Pollita
Waxaan hayaa iPhone s4 oo waxaan ku jiray diskoo waan helay waana maalintii xigtay waxaan horeyba ugu jiray xaqiijinta xogta ama sida loo ogaado cidda ay ahayd
Ka jawaab ugaarsade
SALAAMO WACAN SUBAX, WAAN MAAMULKA GAS STATION, OO MACMIilku iiga tagey iphone-kiisa 4 SABABO KADHIGIISA OO UU SOO BANDHIGAY, WUXUU YIDHI TODOBAAD BAAN KU SOO LAABANAYNA WUXUU AHAY 2 BILOOD OO AAN LOOGU NOQON, OO AANAN ' T TALAHAY IN UU SOO NOQON DOONO SABABTA AY U DHACDO TODDOBAADKII UU KA BAXAY SHUFADIISA IPHONE OO KA BAXA BATTARKA OO LAGU XIRAY, WARBIXIN XAD LEH MA LEEYAHAY WUXUU SAMEEYAY MACAAMIILKAN LAAKIIN MA GARAN KARO SIDII LOO XIRIIRI LAHAYN MACAAMIISHAN SI AAN UGU GARO SI AA IIGU BIXIYO AMA UGU YAR SIIYA AQOONSIGIISA SI AAD UGU SOO CELI KARTO QARAARKAYGA MAHADSANIDIIN IYO SUBAX WANAAGSAN
Ku jawaab larry
Haye, waxay i iibiyeen iPhone 5 xiran oo waxaan rabaa inaan dib kuugu soo celiyo mana heli karo wado aan booliska kula xiriiro.
Waa waxa ugu muhiimsan ka hor intaadan iibsan iphone ama waxkasta oo ka socda Apple si aad u ogaato hadii uu ku xaniban yahay icloud, adiga ayey kugu dhejiyeen laakiin si fiican.
Waxaan rabaa inaan soo celiyo iphone, way iga iibiyeen laakiin way i khiyaaneeyeen, hada waxaan rabaa inaan la xiriiro milkiilaha laakiin ma aqaano sida loo sameeyo maxaa yeelay qolka unyl ma shaqeynayo.
Waxaan helay iPhone laakiin waxay umuuqataa inay ajnabi tahay badhanka korontaduna waa cilad, sidee ku bilaabi karaa maadaama aanan rabin inaan ugeeyo booliska waana aaminsanahay Keno ..
Waad ku mahadsantahay maqaalkaaga ku saabsan helitaanka iphone iyo ipads hadii ay dhacdo xatooyo. Anigu waxaan ahay blogger ku takhasusay mowduucan waxaanan kuu xaqiijin karaa in hal softiweer gaar ah uu ka hortagi karo kiisaska aan loo baahnayn. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow boggeyga:
Wax kasta oo aad ka hesho websaydhkaygu waa macluumaad xiiso leh oo sax ah.
weydiin: iphone 5skeyga waa la xaday waxaan raadiyay tan mudo 3 bilood ah, maanta waxaan farriin ka helayaa icloud oo leh waan helay, laakiin ma arki karo khariidada, waxaa ku qoran Offline. Ka dib waxaan ka helayaa emayl icloud sidoo kale sheegaya in la helay iyo in meesha ay ku taal la heli doono 24 saacadood laakiin kama muuqato khariidada. Maxaan sameyn karaa si aan u arko, mahadsanid!
Kujawaab MID KASTA
hello midkee xageed ka timid Waxaan leeyahay inkasta oo suurtogalnimadu ay aad u yar tahay dhowaan (laba ama saddex maalmood) waxay iibiyeen iPhone 5s saaxiibkood kaas oo xaniban oo sida muuqata waxay isku dayeen inay dib u bilaabaan oo "iibiyaha" ayaa u sheegay: wuxuu lahaa daminta saddex bilood ka hor waayo anigu ma isticmaalo…. oo waan sii waday tan iyo isla labadaas ama seddexda maalmood ee aan ku celceliyo waa wax aan dhici karin laakiin waa laga yaabaa in laga yaabo
Ku jawaab daft654
Waxaan ka imid isgaarsiinta Maipú, Santiago, Chile. laakiin sida muuqata waxay ku kaceen codkayga oo waxay iphone 5s ka saareen diiwaankeyga, hada ma arki karo hadda «Find my iphone». Sida muuqata waan waayey.
Waxaan rabaa inaan helo milkiilihi iPhone ah oo ka yimid USA oo lumay mana garanayo sida
runtii waxay ahayd iibsi xun oo aan wax badan ka ogeyn
hello, waxaan ka helay iphone shalay Madrid. Waxaan isku dayay inaan helo milkiilaha laakiin suurtagal maahan maxaa yeelay waxaad u baahan tahay lambar aad gasho, marka ma aanan wici karin lambar kasta, wax wicitaanno ah ma soo gaarin sidoo kale. Maanta waxaan u geeyay Booliska Qaranka si ay u eegaan haddii ay heli karaan milkiilaha waxayna ii sheegeen in lambarka IMEI ee taleefankaas, uusan u muuqan wax la cambaareeyay. Telefoonki way qaateen waana intaas. Marka maxaa chafón ah oo ugu dambeyntii aan gaarin milkiilaheeda. Waxaan ka codsaday inay i siiyaan shahaadada keenista markaa waxaan haystaa nambarka IMEI, waana ogahay inaan ka diiwaangashan oranji. Ma jirtaa waddo lagu heli karo cidda iska leh?
Waxaan helay iPhone 6
Laakiin waxay ka timid waddan kale, sidee baan ugu soo celiyaa oo aanan wax dhibaato ah ama wax la xiriira milkiilaha leh
Waad salaaman tahay, waxaan ka imid Costa Rica, sodohday waxay ka shaqaysaa boosteejada basaska, mid ka mid ah basaskan waxay ka heleen iPhone 5, way haysatay 3 bilood ama wax la mid ah, iyadoo sugaysa inay eegto haddii qof codsanayo, laakiin maya, Marka isagu wuxuu siiyay aniga iyo ninkeyga, waan daarnay laakiin wuu xaniban yahay, waxaan arki karaa oo keliya IMEI, halkan laga bilaabo halka aan kula xiriiri karo si aan u codsado macluumaadka! Mahadsanid
Haye, waxaan ka imid Peru, taleefankayga iPhone 6 waa la xaday, waxaan galiyay qaab luntay, fariin ayaan uga tagay shaashaddaada qufulka, laakiin waxaan farriin ka helay taleefankayga gacanta oo aan u adeegsaday waxayna igu yidhaahdeen sidan: « Digniin! Icloud iphone 6 qaab lumay ama la xaday ayaa la helay, eeg meesha ku taal Login.findmyiphonelost.com. Waxaan rabaa inaan ogaado haddii kuwani sax yihiin iyo in kale. Waan jeclaan lahaa faallooyinka ama haddii ay taasi ku dhacday qof
Waxaan iibsaday iPhone 5s markii aan soo ceshadayna, farriintii milkiilaha ee lambarka ayaa soo muuqatay, waxaan wacay lambarkaas waxayna ii sheegeen inaysan jirin wax taleefan gacmeed ah oo ay waayeen, inay mid kale khiyaanayn doonaan, sidee ayaan ula xiriirayaa markaa?
Darajooyinka Angello dijo
Shirkaddani waxay u baahan doontaa oo keliya IMEI inay ku siiso "TAAGEERADA MUDDADA AH" ugu dambayntiina waxay gacan ka geysaneysaa helitaanka milkiilaha. Maxaad uga jeeddaa taageerada terminal? Ma ila soo xiriiri doonaan milkiilaha iphone-ka? Waxaan rajeynayaa inaad cadeyso shakigeyga fadlan.
Ku jawaab Angello Grados
Waxaan hayaa iPhone 6 oo ay xireyso Icloud, waxay ka timid Sprint laakiin ma heysato jab sidoo kalena iima ogola in aan wax helo, weydii koontada isla markaaba si aanan u arki karin dadka aad la xiriirto ama wax kale, wac Sprint una sheeg iyaga Xaaladda oo waxaan ku iri haa lambarka IMEI waxay iga caawin karaan inaan helo milkiilaha jawaabtuna waxay ahayd: MAYA.
Fadlan, waxaan rabaa in aan soo cesho Iphone 5s oo aan ka helay Argentina oo leh safka Mareykanka, laakiin ma heli karo sida loo sameeyo haddii qof foom haysto, fadlan ii soo qor Abertutti@gmail.comHaddii qof garanayo sida loo sameeyo, ii soo dir oo fadlan ha rabin inay waqtigayga iga lumiyaan, waxaan u baahanahay inaan u celiyo laakiin cidda leh, mahadsanid ANGELO
Waad salaaman tahay, waxaan helay iPhone 6 oo jiifa wadada, shaashada oo dhanna waa jaban tahay, wicitaanada ayaa soo gala laakiin waxba kama jawaabi karo waxna ma arki karo, sidee ku ogaan karaa isticmaalaha icadka ee uu la xiriiro inuu kuu soo diro emayl ? Waxaan arkay in qufulka dhawaaqa loo hawlgeliyey IMEI-gaas
Fadlan waxaan ka helay Iphone 5s oo ku yaal xaafada san rafael ee badhtamaha havana cuba oo leh khadadka verizon american, haddii qof taleefankoodu ka lumay emayl iigu soo dir abertutti@gmail.com waana soo celin doonaa, habsiinta fadlan, sida kaliya ee lagu ogaan karo inuu mulkiilaha iska leeyahay waa inuu ii yimaadaa oo uu furaha furaha furaha hortooda dhigaa ama ii soo diraa waanan ku siinayaa markaa adiga ayaa ah milkiilaha, maya waxay igu mashquulinayaan inaan baaro ama i weydiiyo su'aalo aan caadi ahayn
Waxay ka tageen iPhone 5s oo la ilaaway meeshii telefanada gacanta lagu rakibo garoonka diyaaradaha ee Kolombiya ... waxay leedahay qufulka loo yaqaan 'iCloud access qucking' ... oo aanan isku deyin inaan cadeeyo maadaama uusan taleefankayga aheyn ... Waxaan ka saaray jabkii waxay ka timid shirkad ku taal Kanada ... waxayna ku jirtaa qaab diyaaradeed ... Waxaan rabaa inaan soo celiyo ... maadaama aanan jeclayn inay ku dhacdo aniga ... I Waxaan ku xiraa iTunes-ka waxaanan helayaa Maria Camila ... laakiin wax kale maahan ... maxaa la qaban karaa ????
Haddii aan ka helo iPhone 6-ka Spain isku day inaan soo celiyo, anigu waxaan joogaa Kolombiya, in ka badan ama ka yar 4 bilood ka hor ayaan helay, suurtagal ma tahay inay halkaan ka helaan?
Waan helay midna waxay lahayd farriin abaalmarin celin iyo lambar fariin ah oo aan waco. La xiriir mulkiilaha wuuna ku jawaabey maya mahad .. miyaa loola jeedaa waan hayaa? Sidaan ku helay ?
Haddii abaalmarin jirto oo aadan rabin inaad bixiso, miyaan xaq u leeyahay inaan dalbado?
Waxaan helay iPhone 5 mana garanayo sida loola xiriiro milkiilaha (a) wuxuu ka yimid wadan kale wixii uu haystay darteed, qof ayaa iga caawin kara mahadsanid
Ku jawaab yonny
Waxaan u baahanahay milkiile iPhone 4 ah inuu furo sidoo kale waa la iibsaday gacan labaad
Waxaan xaday iphone 6keyga laakiin bil ka hor ayeey aheed in aanan helin meesha ay ku taalo mana garanayo waxa kale ee aan sameeyo
Waxaan ka helay iphone-ka geela dariiqa ah waddo ku taal magaalada Jalisco sida muuqata way iska tuureen maxaa yeelay qof ka baxsan milkiilaha ma isticmaali karin madaama aysan haysan qashin sidaa darteed sanka shirkada ama wax x qaabka aan rabo inaan u soo celiyo sanka vdd wuxuu jecel yahay milkiilaha sidaan sameeyo si aan u helo madaama aanan rabin wax dhibaato ah oo kayar taleefanka gacanta mahadsanid
Haddii milkiiluhu uu ku qoray xogtooda arjiga caafimaadka. Siinta SOS, xogta caafimaadka ayaa ka tagaysa milkiilaha iyo cidda loo wacayo. Sidoo kale haddii aad weydiiso SIRI cidda iska leh iphone-ka, waxay heli doontaa xiriirka milkiilaha. Haddii xiriiriyahaagu uu ku habeeyay xogtayda.
Elizabeth jimenez dijo
Waxaan lumiyay iPhone 6-kayga oo lagu daray guri hudheel ku yaal Madrid, waxaa loo yaqaan 'Corbero hawlgab', faahfaahintuna waxay tahay waxaan ku ilaaway sariirteyda anigoo raadinaya warqada duulimaadkeyga, waxaana ka tagay goobta anigoon soo qaadin, 10 daqiiqo kadib. Waan gartay waana ku laabtay goobta, dabcan markaan ka tagay goobta waxaa jiray oo kaliya kan ilaalinayay laakiin markaan soo noqday dib dambe ugama celin, maanta waxaan helay ogeysiin ah inay hayaan waan helay laakiin iima siinayso fursad aan ku arko meesha iyo cidda haysata.
Ma qofbaa ku dhacday oo nasiib ma u yeesheen inay dib u helaan? Waxaa xusid mudan inuu ku xiran yahay raad ductile ah sidoo kalena lagu furay lambarro.
U jawaab Elizabeth Jimenez
Waxaan ka helay Iphone 6+ garoon diyaaradeed, intii aan diyaarada fuulayay ayaan taleefanka ilaaliyay hadii ay dhacdo in qof ku arko gacantayda oo iga codsado inaan soo celiyo. Tilmaamaha shaqaalaha diyaaradda ayaan ku qasbay inaan damiyo intaan safrayno. Markii aan gaadhay meeshii aan u socday ayaan daaray oo shaashadda waxaan ku arkay wicitaan taleefan ah oo iga baaqday, waxaan doonayay in aan ku soo celiyo taleefanka isla iPhone-ka, laakiin waxay i waydiisay furaha furaha, oo aanan garanayn. Markii aan codsaday lambarka furaha, waxaan joojiyay in aan arko nambarka wicitaanku ku soo laabanayo, waxaa igu soo dhacday in aan damiyo oo aan shido laakiin taleefankayga gacanta ayaan ku hayaa si marka uu ogaysiiska wicitaanku mar labaad u muuqdo, u fiirso nambarka oo garaac tayda. Dib u bilaabida kombiyuutarka waxay bilawday inay masaxdo waxkasta waxayna ahayd warshad ahaan.
Waxaan u geeyay adeeg bixiyaha taleefanka ee "ay dhibaatadu soo gaadhay", waxaan waydiistay in laga helo meesha ay ku jirto IMEI ee keydkooda ku qoran waxayna siin doonaan lambarkayga, qofkii ii jawaabay wuxuu igu jawaabay in (IMEI) taleefanku aanu diiwaangashanayn. sida ay u iibiyeen sidaas darteedna aysan haysan waddo ay ku helaan milkiilaha. Waxaan u soo jeediyay SIM folio markay muujineyso inay ii sheegeyso in maadaama ay nano sim tahay, lambarradii ay ku aqoonsan laheyd xariiqii ay laheyd waa la jaray. Waxaan weydiiyay marwada waxa la sameeyo haddii aan doonayo inaan soo celiyo, uma baahni. waxna iima sheegto.
Waxaan rajeynayaa in milkiiluhu ka heli doono isagoo adeegsanaya aaladda goobta, in kasta oo aan mar horeba tirtiray qadka SIM-kan, laakiin waxaan rajaynayaa in IMEI aan ka heli karo, wali SIM-giisiina gudaha ayaan ku jiraa oo si joogto ah ayaan ugula wareegay shabakad Wi-Fi ah , sugaya in la gaaro.
Brian ghoul dijo
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ka ogaado milkiilaha iphone 5 oo u yimid inuu iigu deeqo si aan u habeeyo oo waxaan ahaa doqon waxaan siiyay lacagta pawnka kii iga dhigayna ciyaartaas kuma bolibin lacagta in aan u siiyay cowska waxaanan rabaa in aan la xiriiro milkiilaha waxaan jeclaan lahaa caawintiisa
Jawaab Brian Ghoul
Angel Enrique Paredes Grandez dijo
Waad salaaman tahay, waxaan ka imid Peru, waxaan iibsaday iPhone 6s gacan labaad waxaana ku xiran id iyo password waxaana horey ula xiriiray milkiilaha anigoo sharaxaya wixii dhacay Fellana waxay ii sheegtey inay xadeen laakiin anigu eed kuma lihi inaan iibsado waxaan jeclaan lahaa quirks waxay caawineysaa inaadan mar dambe adeegsan waxayna ka timid reer Brazil
Jawaab Angel Enrique Paredes Grandez
waa su'aal ... maxaad ka yeeli laheyd kiiskeyga? Ogsoonow in wiilkaygii hore i iibiyey iPhone 5 ka dibna uu kaliya i weydiistay lambar sir ah oo uu iga sii daayay fariintiina ay joojisay inay soo baxdo oo aan geli karo shaqooyinkeeda, sababtoo ah aniga ayey igu soo dhacday inaan cusbooneysiiyo si fiicanna waan u sameeyay qaladkaas iyo maanta waxay i weydiineysaa id tufaaxa iyo lambarka sirta ah, maxaad sameyn laheyd haddii aad haysatid iimaylka milkiilaha iphone, ma la xiriiri doontaa isaga si aad uga saarto liiskiisa qalabka ku jira akoonkiisa icloud?
Waxaan u cusbooneysiiyay macruufka 10 sababtoo ah waxay laheyd 8.3 oo tan iyo markii ay u shaqeysay inay raadiso iphonekeyga waxay i weydiineysaa isticmaalaha oo way dhaaftaa, markay i siisay haddii ay geli karto isdhexgalka iphone gabi ahaanba laakiin markii la cusbooneysiinayo taasi way i weydiineysaa taas, laakiin waan ogahay e-maylka milkiilaha oo wuxuu joogaa USA saaxiibtiisna waan u dirayaa iyada oo ninkeygii horena wuxuu ka baqayaa inuu ninku halkan ka hadlo oo uu weydiiyo waalidiinta inay iibiyeen iyo inay waxay weydiin doontaa iyada x isaga, taasi waa sababta aanan u garanayn waxa la sameeyo haddii aan u diro warqadda aan horeyba u haystay inaan diro ama maxaa?
waxa dhacaya ayaa ah inaysan doonayn inay iga caawiso taas naxariis dartiis, maxaa yeelay sannad ayaa ka soo wareegay markii uu iyada u soo diray
Waxaan rabaa inaan ogaado cidda iska leh iPhone 6 oo aan ku celiyo iyaga Maxaan sameeyaa?
Waxaan helay iPhone 6s oo lagu daray waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo helo milkiilaha, kuwani waa xogta haddiiba qofkasta oo halkan soo gala uu ka yimid warbixinta Apple ID iyo lambarka sirta ah ee loo adeegsaday in lagu kaydiyo iPhone-kan. (4●●●●●@qq.com)
Ku jawaab wilfredo
manuel maza dijo
Waxaan hayaa iPhone 6 laakiin waa icloud
Jawaab Manuel Maza
Waad salaaman tihiin, waxay i siiyeen Iphone 4 laakiin waxay i weydiinaysaa aqoonsiga iyo eraygiisa sirta ah, waxaan jeclaan lahaa inaan ka ogaado milkiilaha laakiin Apple ma siiyaan macluumaad waxtar leh .. Haddii qof hore u yaqaanay sida loo sameeyo, fadlan ii soo qor emailka nico.113@hotmail.com
Waxaan helay iPhone 6s waxaanan rabaa inaan raadsado milkiilihiisa, sidee ku samayn karaa?
Isla waxaas ayaa kugu dhacay, waxay i iibiyeen iPhone 5 150 kii wuu xirnaa markaa markaan imid gurigayga waan shiday oo waxaan haystay koodh galitaan daqiiqaddi aan arkay inay xanibeen maxaa yeelay way raadinayeen iyo hada ma garanayo shirkad ay tahay ama magaca kaliya waxaan ogahay in magaca qofka uu ku bilaabmo f.
Ku jawaab yarvysL
hahaha, waan jebiyey oo diiray… qalab gebi ahaanba aan waxtar lahayn oo leh icloud ha, hahaha, shit to to…, saxanka ayaa u qalma 20 doolar oo aliexprees ah, u beddel 12 daqiiqo, waxaad horey u laheyd moobil cusub…., ha nacasin Dadka, ka dib Waxay aaminsan yihiin in iyaga oo abuuraya koontada geedka tufaaxa oo ay jeebkooda ka buuxsadaan in badan, inay heystaan ​​mobilka weligood iyagoo ka fikiraya inay dib ugu celin doonaan iyaga markay xireen ..., hahahaha, si kastaba ...
Iyo iibsashada taleefanka gacanta kumanaan kun oo lacag ah si loogu qoro watka loona waco ..., xitaa kama faalloonayo taas ..., ka dib lumiyo ama la xado ... 100 illaa 1000 ka mid ah way cadahay halkaan u tagayo maya ..., markale ayaan idhaahdaa dhamaadka ..., tanina waxay u tahay kuwa helay mid xannibmay ..., madaxaaga ha xoqin qodobadan iyo kunka kuwa kale, soo iibso saxanka, fur fiidiyow wanaagsan oo youtube ah si aad u raacdo tallaabooyinka oo aad adigu u beddesho ..., horeyba waxaan u leeyahay 20 lacag
Waxaan helay IPhone 8 illaa iyo maanta waligood tan kuma calaamadeynin magaca Ximena Vilchis haddii qof ogyahay ama wax ka ogyahay wicitaankeeda 5586908130 si loo soo celiyo
Ku jawaab Donovan
357275093012331 IMEI kan, fadlan ila soo xiriir
Qalabka gacanta waa XS max.
Juan Luis Prado dayac dijo
Waxaa iga lumay iphone 7 waxaana raadinayay iphonekeyga wuxuu isiiyay meel aan aaday meeshii ay ku taalo waxaana ii soo baxday inay tahay mid la degan yahay waardiyuhuna iima ogola inaan galo si aan u baaro kiiska inbadan, wuxuu ii sheegay oo kaliya Warbixinta ayaa dhici doonta, waxay noqon doontaa caqli gal in lagu wargeliyo booliska oo aan weydiisto caawimaad si aan u helo taleefankayga?
Ku jawaab Juan Luis prado negrete
Sida loo kiciyo xakamaynta badhanka ee iOS 7